I-Trail Time Bed & Breakfast - I-Airbnb
I-Trail Time Bed & Breakfast
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Ann
Hlala enhliziyweni yeCentral Otago - imizuzu emi-2 ukuya e-Alexandra nemizuzu emi-4 ukuya eClyde. Ukuthatha/ukwehlisa kwamahhala kwe-Clyde Rail Trail. Amakamelo okulala amabili ayatholakala - 1 Queen & 1 Twin room. Amanani asebusika (Juni kuya kuSepthemba) $65 kumuntu wokuqala ngobusuku kanye nama-$25 kumuntu ngamunye owengeziwe. Izingane zamukelekile. Indlu yesimanje - efudumele & ihlanzekile. Ibhulakufesi lezwekazi lifakiwe enanini. Izinketho zamahhala ze-Gluten/lactose. I-Wi-Fi yamahhala iyatholakala. PRIVATE lounge izihambeli, yokugezela, indlu yangasese, yokudlela & TV indawo kanye ukusetshenziswa ngokugcwele ikhishi.
I-Trail Time itholakala endaweni encane yokuphila. Indlu yesimanje, ivulekile, ifudumele futhi iyamukeleka. Isishisi esikhulu sezinkuni sidala umoya opholile futhi sifudumeza indlu yonke nakuba amagumbi ezivakashi enamahitha ahlukene nawo. I-air con unit enkulu nayo iyasebenza uma kunesidingo. Igumbi lokuphumula lezivakashi linezihlalo ezithokomele, itafula lokudlela, i-smart TV, izinto zokufunda [umlando othile wendawo nolwazi] kanye nesilayidi esiphumela kuvulandi ovikelekile. Leli gumbi linombono omuhle futhi lineminyango eshelelayo yangaphakathi ukuze ivalwe uma ingekho endaweni yokuphumula enkulu kanye nendawo yasekhishini. Amakamelo okulala anamakhabethe amakhulu anama-hangers okugcina izingubo zebhizinisi noma zomshado zisezingeni eliphezulu. Umbhede ngamunye unengubo kagesi futhi izingubo zokulala ezengeziwe ziyatholakala. Indlu yokugezela yesivakashi ivulekile futhi ayilungile. Isimo sendawo kufanele sibukwe ngawo wonke amafasitela amakhulu futhi ngempela sisenhlizweni yeCentral Otago. Izingadi zibonisa indawo yendawo enama-tussocks, amadwala, izindawo ze-schist kanye nezinhlobonhlobo zezihlahla eziqhakazayo. Umbala ohlukahlukene uvela unyaka wonke. Amakamelo ezivakashi avulekile, ahlanzekile anethezekile futhi afakwe kahle. Uvulandi unikeza ngempela indawo yokuphumula evikelekile evikelekile enokubuka kweCentral Otago. Ngakolunye uhlangothi lothango lwendlu amahhashi ethu okuncintisana angu-4 adla. Ingxenye yendlu ibiyelwe ngokugcwele endaweni ephakeme efanele ukuqukatha izinja ezincane ngokuphepha. Indawo yethu iyimpahla yangempela njengoba siphakathi nesifunda sendawo futhi siseduze nezinto eziningi.
4.98 · 330 okushiwo abanye
I-Trail Time itholakala ku-Airport Road okuwumgwaqo oyiluphu othule ohambisana nomgwaqo omkhulu u-Clyde/Alexandra Highway futhi ojoyina lo mgwaqo omkhulu kuzo zombili iziphetho. 'Sinendawo, indawo' njengoba siwusizo ezintweni/izindawo eziningi. Siyizwe langempela le-Central Otago eline-thyme, amagquma namaphayini kanye nonogwaja wezikhathi ezithile. Sizungezwe izindlela zokuphila ezincane ezifana nokwenza kwethu ukuthula nokuthula. Sinemibono emangalisayo yeThe Old Man Range, The Dunstan Mountains kanye namadwala endawo adumile - The Old Woman rock[Leaning Rock] kanye neThe Old Man rock [The Obelisk].
Ababungazi bakho uBernie no-Ann bayakujabulela ukukusiza nganoma iyiphi indlela abangakwazi ngayo. Wamukelekile ukuba uchithe ubusuku nabo egumbini lokuphumula elikhulu noma ujabulele ubumfihlo endaweni yokuphumula yezivakashi. Ukuba i-accountant yangaphambili uBernie unolwazi olubanzi ngezinto eziningi futhi kulula kakhulu ukukhuluma ngakho. U-Ann ungumgibeli wehhashi nomfundisi. Njengothisha owake waba nguthisha wesikole uyazi ukubaluleka kokwenza abantu bakhululeke ukuze wonke umuntu akhululeke futhi ajabulele ukuhlala kwakhe ku-Trail Time.
Ababungazi bakho uBernie no-Ann bayakujabulela ukukusiza nganoma iyiphi indlela abangakwazi ngayo. Wamukelekile ukuba uchithe ubusuku nabo egumbini lokuphumula elikhulu noma ujabul…